ग्रहणको समयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ? | नेपाल घटना
ग्रहणको समयमा के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन ?
प्रकाशित : ७ असार २०७७, आईतवार ०७:३८
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो सूर्य ग्रहण लाग्दैछ । सुर्य ग्रहण को समय करिब ६ घन्टा हुनेछ भने नेपालमा जम्मा ३ घण्टा ३१ मिनेट सम्म अवलोकन गर्न सकिने छ ।
सूर्य ग्रहण काठमाडौंबाट १०ः५४ बजे प्रारम्भ हुने छ भने मध्यान्न १२ बजेर ३८ मिनेटमा र अपरान्ह २ बजेर २३ मिनेटमा मोक्ष हुनेछ ।
आज साढे ३ घण्टा लामो खण्डग्रास, राशी अनुसार के फल प्राप्ती हुनेछ ?
सूर्यग्रहणका बेला गर्भवती महिला, बालबच्चा, रोगी र वृद्धवृद्धाले खुला आकाशमा सूर्यतर्फ हेर्न नहुने सुझाव ज्योतिषले दिएका छन् । सूर्यग्रहणको शूतक भने शनिबार राति १० बजेर ५० मिनेटदेखि नै सुरु भइसकेको छ ।
ग्रहणको समयमा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र बिरामीबाहेकले भोजनसँगै शयन, मैथुन, शृंगार र वध गर्न हुँदैन ।
ग्रहणको समयमा गर्भवती महिलाले घरबाहिर निस्कन नहुने शास्त्रमा उल्लेख छ । गर्भवती महिला ग्रहणको समयमा कहिल्यै पनि बाहिर जानु हुँदैन । ग्रहणको समयमा बाहिर निस्कँदा बच्चामा खराव असर पर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
ग्रहणको समयमा विभिन्न पराबैजनी किरणहरु उत्पन्न हुने हुँदा बच्चामा नकारात्मक असर पर्छ । ग्रहणको समयमा वातावरणमा समेत नकारात्मक किरणहरु पैदा हुने हुँदा घर बाहिर ननिस्कनु नै राम्रो मानिन्छ ।
आज करिब ६ घण्टा लामो सुर्य ग्रहण्, नेपालबाट करिब साढे ३ घण्टा खण्डग्रास देखिने
शताब्दीकै ठूलो ! सूर्यग्रहण सुरु